Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Blood in Stool စအိုက သွေးယိုခြင်း
ကျွန်မရောဂါအကြောင်းကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရော ကျွန်မဝန်းကျင်မှာရော မျိုးစုံသုံးသပ်သံတွေကြားနေရလို့ပါ။ အသက်က လေးဆယ့်တစ်နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်သယ်ပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်က အညောင်း ထိုင်ရတာ အင်မတန် များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းလျှောက်တာတို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့လည်း ပုံမှန် မဟုတ်တောင် ကျန်းမာရေးအသိစိတ်နဲ့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက လည်ပင်းကြီးလည်း ခွဲဖူးပါတယ်။ ကင်ဆာ မဟုတ်ဘူးလို့ အဖြေထွက်ပါတယ်။ (အယ်လ်ထရောက်ဆင်) ဆေးကို တစ်နေ့တစ်ခြမ်း ပုံမှန်သောက်နေဆဲပါ။ အခုကျွန်မ ဝမ်းသွားတိုင်း သွေးတပေါက်ပေါက်နဲ့ ကျနေတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ကျကျခြင်းလန့်ပြီး အထွေထွေနဲ့ပြတော့ အတွင်းလိပ်ခေါင်းလို့ ပြောပါတယ်။ သွေးတိတ်ဆေး သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေလာတာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ သွေးကလည်း နေ့တိုင်းလိုလို ဝမ်းသွားတိုင်း ပါပါတယ်။ ဝမ်းလုံးဝမချုပ်တတ်ပါဘူး။ သွေးပါပုံပါနည်းက ပေါက်ကနဲကျရင်ကျ၊ မကျရင် ဝမ်းထဲမှာရောပါ တတ်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းရော သေချာရဲ့လားရှင်။ အူမကြီးကင်ဆာတွေ ဘာတွေများ ဖြစ်နိုင်လားဟင်။ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်း ဆက်နေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်တော့ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာပေါ့။
သွေးက ဘယ်တွေကနေ လာနိုင်သလဲ။ အစာခြေလမ်း အထက်ပိုင်းခေါ်တဲ့ အစာအိမ် နဲ့ အစာမျိုပြွန် ကနေလာနိုင်တယ်။ အစာချေလမ်း အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အူမကြီး၊ အစာဟောင်းအိမ် နဲ့ စအိုကနေလာနိုင်တယ်။ ဒီနှစ်မျိုးကြားထဲက အူသိမ်ကနေ သွေးယိုတာ ရှားတယ်။ အူမကြီးရဲ့အလုပ်က ကျေချက်လို့မရတဲ့ အစား-အသောက်ထဲက ရေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ အူမကြီးရဲ့အောက်ဆုံး ၁၅ စင်တီမီတာဟာ အစာဟောင်းအိမ် ဖြစ်တယ်။ အဖျားဆုံးမှာ စအိုရှိတယ်။
• ဝမ်းထဲသွေးပါတယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့ သွေးရဲ့ အရောင်က မတူကြပါ။ သွေးဘယ်ကနေလာသလဲ အပေါ်မှာ သွေးအရောင် မူတည်တယ်။
• အကြမ်းပြောရရင် စအိုနဲ့ နီးရာကနေလာရင် သွေးအရောင်က နီရဲနေမယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သဘော ဖြစ်တယ်။
• စအို၊ အစာဟောင်းအိမ်နဲ့ အူမကြီး အောက်ပိုင်းကနေလာရင် နီမယ်။
• အူမကြီး အလည်ပိုင်းနဲ့ အထက်ပိုင်းကနေလာရင် နီညိုမယ်။
• အစာဟောင်းအိမ်ကနေလာလဲ အဲလိုဘဲ။ နီညိုမယ်။
• အစာအိမ်နဲ့ အူသိမ်အစပိုင်းကဆိုရင် မဲနက်နေမယ်။ ကတ္တရာစေးလို စေးကပ်နေပြီး အနံ့ဆိုးတယ်။ Melena ခေါ်တယ်။
3) Colon cancer and polyps အူမကြီး ကင်ဆာ နဲ့ ကင်ဆာ မဟုတ်တဲ့ အသီးလုံး = သွေးက အသင့်အတင့်သာ များမယ်။ ဖြစ်လိုက် ရပ်လိုက်နေမယ်။ သွေးက နီရဲနေမယ်။ ညိုနေနိုင်တယ်။ မဲတာလဲ ရှိတတ်တယ်။ အူမကြီး ကင်ဆာ လက္ဓဏာများ = ဖြစ်ကာစ ဘာမှမခံစားရဘူး၊ ဝမ်းသွားတာ ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်လာတာ၊ ဝမ်းချုပ်မယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်၊ ဝမ်း ပျော့မယ်၊ ဝမ်းမာမယ်။ ဝမ်းထဲသွေးပါမယ်။ ဗိုက်အမြဲလိုအောင်းနေမယ်၊ ဝမ်းသွားပြီးပေမဲ့ သွားချင်စိတ်မကုန်ဖြစ်နေမယ်၊ အားယုတ်မယ်၊ ဘာလို့မှန်းမသိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျကျလာမယ်၊
5) Angiodysplasias ဆိုတာ အူမကြီးနံရံအောင်မှာ သွေးကြေားလေးတွေ ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်နေလို့ သွေးယိုတယ်။ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။
• History and physical examination ရောဂါရာဇဝင်၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊
• Anoscopy ကရိယာနဲ့ကြည့်ခြင်း၊
• Flexible sigmoidoscopy ကရိယာနဲ့ကြည့်ခြင်း၊
• Colonoscopy ကရိယာနဲ့ကြည့်ခြင်း၊
• Video capsule and small intestine enteroscopy ကရိယာတွေနဲ့ကြည့်ခြင်း၊
• Esophagogastroduodenoscopy ကရိယာနဲ့ကြည့်ခြင်း၊
မေးတဲ့သူ စစ်ဆေးတာတွေ မလုပ်ခင် -
3. Piles လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေး-အဖြေများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/07/q-and-on-piles.html
4. Piles (Hemorrhoids) Treatment လိပ်ခေါင်းကုနည်းများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/hemorrhoids-treatment.html
6. Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/fistula-in-ano-fia.html တွေကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်။